Soomaalaay U Gar Qaada Ra’iisulwasaare Kheryrre Iyo Maxamad Ismaaciil!! WQ: Warfaa-Kheyrdoon. – Shabakadda Amiirnuur
Soomaalaay U Gar Qaada Ra’iisulwasaare Kheryrre Iyo Maxamad Ismaaciil!! WQ: Warfaa-Kheyrdoon.
June 25, 2019 4:20 pm by admin Views: 96
Dowladda Ingiriiska waa gumeystaha ugu xun, gumeystayaashii dalka Soomaaliya kusoo duulay ama qabsaday waayo waa gumeystaha kaliya ee markuu naga tagayay dhulkeena u qeybiyay dowlado Kiristan ah sida:- Itoobiya iyo Kenya.
Itoobiya wuxuu inaga siiyay Hawd iyo Galbeed. Kenyana wuxuu inaga siiyay NFD, waxaana qorshahan majaraha u hayay madaxdii Ingiriiska oo ay ugu horreyso Queen Elizabeth.
Qormadan waxaan doonayaa inaan ku eego laba munaasabadood oo ay qoyska reer Boqor ku kala qabsadeen Hargeysa iyo Muqdisho, laguna casuumay Kheyrre iyo Baasarce.
Kheyrre, wuxuu munaasabaddan ka sheegay iney tahay mid qaali ah oo farxad galineysa DF, maadaama meesha ay ka dhacayso ay tahay Soomaaliya. Kheyrre ayaa wuxuu kamid ahaa dadkii ugu dambeeyay ee yimaada goobta xafladdu ka dhacaysay, sidaa darteed wuxuu la fajacay Sambaloolshe oo kaga soo horreeyay, markaasaa wuxuu ku yiri’ “Waa yaa ku keenay meehsa” Sambaloolshe ayaa ku jawaabay “meesha ma ahan meel aad adinku ka talisaan” Hadalkaas waxaa loo sii tarjumayay saraakiishii Ingiriiska barbar taagnayd kuwaasoo qosol oodda jabsaday, saa waa agrtoode.
Dhammaan xubnihii laba kaarre-yaasha ahaa ayaa madasha ka sheegay in boqoradda Ingiriisku tahay qof halyey ah oo aaney abidkood illaawi doonin iyagoo taa u sababeeyay iney wax weyn u qabatay dadkeeda.
Garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa oo uu dhistay gumeystihii Ingiriiska si uu u isticmaalo ayaa waxaa kasoo degay “Duke of Gloucester” oo ay Eeddo u tahay boqoradda Ingiriiska.
Alle ha u naxariisto’e, Abwaan Maxamad Ismaaciil (Baasarce), wuxuu kamid ahaa suugaan yahannadii caanka ahaa ee Wuqooyi Galbeed, waxaa loo keenay warqad casuumaad ah oo looga dalbanayo inuu kasoo qeyb galo xafladda soo dhaweynta sarkaalkaas.
Abwaanka oo ahaa nin damiir leh islamarkaana garanaya dhibka uu Ingiriis na baday ayaa wuxuu dabadhilifyadii u sheegay inuu raacayo balse hal shuruud ay ku xiran tahay oo ah inuu meesha ka sheegayo gumeysiga xun ee Ingiriiska iyo sida uu Soomaali u dulleystay, hase ahaatee, waa laga diiday. Markaasuu isagana diiday inuu ka qeyb galo wuxuuna tiriyay suugaantan:
Gumeystuhu wuxuu waagii hore wadan jiray dad uu ku ugaarsado oo aan bulshada dhexdeeda qiimo ka lahayn, balse maanta wuxuu sameystay nidaam dhan oo wada dabadhifyo ah oo dowlad iyo maamullo loogu magac daray. “Alla maxaa ummada Soomaaliyeed la nabay”